South Africa - Zimbabwe Cross Border Car Rentals | Out of State & Cross Country Hires - Drive Africa
Home » Cross Border Car Rental » South Africa to Zimbabwe
Car Rental To Zimbabwe
View the terms and conditions A trip to Zimbabwe from Cape Town is a daunting task but the scenery on the way will reward your curiosity. To hire a car from Cape Town throughout Zimbabwe is easy with Drive Africa. Just choose a car and click on calculate now enter your dates and times and an … Continue reading “Cape Town throughout Zimbabwe”
Durban the beach holiday capital of South Africa is the starting point of your Cross border car rental – Durban throughout Zimbabwe trip. You crisscross the country and enter Botswana and the drive north and exit into Zimbabwe straight to the famous Victoria Falls. To help with the logistics of your trip you have Drive Africa … Continue reading “Durban throughout Zimbabwe”
Johannesburg the city of Gold is the pulsating business heart of South Africa. This is the ideal city to start your journey to Zimbabwe to see the might Victoria Falls. With Drive Africa your cross border car rental – Johannesburg throughout Zimbabwe is made easy and comes with full cover insurance. Our cross border costs into … Continue reading “Johannesburg throughout Zimbabwe”
Car rental to Zimbabwe travel anywhere throughout Zimbabwe no restrictions! Please open the link below and fill in your dates times and click onto continue and quotes will be instantly generated for a number of cars that you can choose from. Enjoy a hassle free car hire to Zimbabwe through Drive Africa!
At last you can finally book your car rental to Zimbabwe from South Africa online and many more countries surrounding South Africa all in 3 clicks.
With our cross border throughout Zimbabwe from South Africa car hire package, also suitable for expats Zimbabwe, we have managed to expand our cheapest “car hire to Zimbabwe” product so that you can now book a car online to Zimbabwe which can travel across the border to Zimbabwe and into other surrounding countries. Zimbabwean expatriates note that only certain cars are allowed to travel across the border to Zimbabwe and the following countries listed under optional extras and the border crossing prices further down.
Zimbabwean expats and tourists to Zimbabwe please be advised that some car groups groups featured are not allowed or permitted to cross the border into Zimbabwe. Please check if the car you are choosing can if it has a tick box for Zimbabwe then that car group is allowed in the box and also mention Zimbabwe and other countries in the other info box so that we can make sure you have no problems when picking up your car car rental to Zimbabwe.
Zimbabwe Cross Border Car Hire from South Africa for Expats to get you Home
At last you can finally book your car hire to Zimbabwe from South Africa online and to all countries surrounding South Africa and to get a price you need 2 clicks the third click confirms your booking and you are able to print out your own rental voucher.
Through careful searching we have finally got a rental company to give us there cars to travel to Namibia, Botswana and Zimbabwe with unlimited kilometers. Please check what cars are allowed into Zimbabwe and other countries. Here are the latest border crossing prices.
Cross border Car hire Zimbabwe prices
to cross borders from South Africa into:
• Zimbabwe (R.1500.-) • Namibia (R.1500.-)
• Botswana (R.1500.-) • Mozambique (R.2500.-)
• Swaziland (R 500.-) • Lesotho (R 750.-)
Zimbabwe car rental for expats to get you home
Are you an expat from Zimbabwe but now living in the USA or UK or somewhere else in the world and are contemplating a visit back to your roots in Zimbabwe?
For a car rental to Zimbabwe from South Africa you need to own your own credit card that can be used for the security and fuel deposit if yes we can help you read on.
Driveafrica.co.za has now teamed up with a Rental Company that allows cross border rentals into Zimbabwe with various different car groups to choose from with rental prices calculated instantly online and if you like the price and most of the time you can book without paying a deposit. Just book, print your reservation voucher and hand in at rental desk on arrival pay for rental and drive off.
When wanting to visit your birthplace or home country to cross border Zimbabwe from South Africa you would normally connect via Europe to South Africa and land in Johannesburg, then proceed to pick up a rental car and then head north with a car hire to Zimbabwe from South Africa.
Unfortunately as you have discovered most Car Rental Companies don’t allow their rental vehicles to enter and exit Zimbabwe with a rented car – we do allow just that. Rent the cheapest car hire to Zimbabwe from South Africa right here on this page with an instant online booking possible.
If you are one of the estimated 3 million Zimbabweans living overseas then we can help you rent a vehicle which can cross the border into Zimbabwe. All Zimbabwe expatriates that want to hire a car from South Africa to Zimbabwe should use the online rental product that we have put together to visit friends and family in Zimbabwe. The product is especially created for Zimbabweans living abroad that want to visit home and cross border from South Africa.
Should you be privileged enough to fly into Zimbabwe and want to rent a car in Zimbabwe we can help you online with the best possible price for car hire in Zimbabwe just enter your dates, times and pick-up drop-off places and the booking machine will instantly calculate you the best rental price out of the top rental companies in Zimbabwe.